စီးပွားရေးဆိုဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံး WordPress Plugins | Martech Zone
လုပ်ငန်းသုံး WordPress ဆိုက်များအတွက် အကြိုက်ဆုံး ပလပ်အင်များ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 25, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 15, 2022 Douglas Karr
အချို့သော WordPress ပလပ်အင် လူကြိုက်များမှုသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူအခြေပြု ထည့်သွင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးကော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာရင်းကို စုစည်းပြီးပါပြီ။ အကြိုက်ဆုံး WordPress plugins လုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာများကို အရင်းအနှီးပြုပြီး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် ဒက်စ်တော့တို့မှတစ်ဆင့်… နှင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ဗီဒီယိုဗျူဟာများကို အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
လူကြိုက်များသော WordPress ပလပ်အင်အချို့ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် WordPress အတွင်းရှိ လုပ်ဆောင်စရာများကို မြှင့်တင်ရန်၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် အံ့သြဖွယ်အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ပလပ်အင်များကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းအတွက် အမြဲတမ်း စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ WordPress ပလပ်အင်များသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ကျိန်စာ နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
WordPress Plugin ပြဿနာများ
တစ်ခါတစ်ရံပလပ်ဂင်များထွက်ခွာသွားသည် လုံခြုံရေးတွင်း ဒီ hackers တွေဟာ malware ကိုသင့်ရဲ့ site ထဲကိုထည့်ရန်အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။
Plugins များသည်များသောအားဖြင့်အပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ပါ WordPress ကို coding စံချိန်စံညွှန်းများထည့်သွင်းခြင်း မလိုအပ်သော အခြားပြissuesနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုကုဒ်။
Plugins များမကြာခဏဖြစ်ကြသည် ညံ့ဖျင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အတွင်းပိုင်းဒေတာသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်စေသည်။
Plugins များမကြာခဏဖြစ်ကြသည် မထောက်ပံ့ဘူး၊ သင့်ကိုခေတ်နောက်ကျသွားစေပြီးသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေနိုင်သည့်ကုဒ်အပေါ်မှီခိုအားထားခြင်းဖြင့်သင့်အားချန်လှပ်ထားသည်။
ပလပ်အင်များသည်တန်ချိန်များစွာချန်ထားနိုင်သည် သင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စအတွက်ဒေတာ…သင်ပလပ်အင်ဖယ်ရှားပြီးနောက်၌ပင်။ developer များကဤအရာကိုပြုပြင်နိုင်သော်လည်းမကြာခဏစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
WordPress သည်အရှိန်မြှင့်လာသည်၊ plugin အဟောင်းများကိုသူတို့၏ plugin repository တွင်မြင်ကွင်းမှသက်တမ်းကုန်သွားပြီး၎င်းတို့အားစာမတတ်ပါကသေချာစေရန် plugins အသစ်များကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုသည်။ Self-hosted WordPress ဖြစ်ရပ်များကသင့်အားမည်သည့် plugin ကိုမဆိုထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားသဖြင့်သင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များပေးရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်ကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။
ထို့အပြင်များစွာသော အကောင်းဆုံး WordPress ပလပ်အင်စာရင်းများ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂါနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာဗျူဟာများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် တီထွင်ခြင်းတွင် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်ခြင်းမပြုပါ။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်သည်… ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကို ကွဲပြားစေရန် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်သွားပါမည်။
​အောက်​မှာ စမ်း​သပ်​ချက်​မှန်​တဲ့ အစုံ​ပါ​ပဲ။ စီးပွားရေးအတွက် WordPress plugins များ WordPress ပလပ်ဂင်များ၏ကျယ်ပြန့်သောရှုခင်းများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဧည့်သည်များကို ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန် အကြိုက်ဆုံး WordPress ပလပ်အင်များ
EventON - သင် WordPress ဆိုက်ရှိနေရာများစွာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းရန်ရှာဖွေနေပါကဤ plugin သည်ကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ထားပြီးလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ - PayPal ကဲ့သို့သော ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုရွေးချယ်စရာမျိုးစုံဖြင့် မြန်ဆန်လွယ်ကူသော ပုံစံတည်ဆောက်ခြင်း၊ MailChimpAWeber နှင့် အခြားသူများ။ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် အပိုပရိုဂရမ်များနှင့် API တစ်ခုတို့ကို ရနိုင်ပါသည်။ သုံးနေရင် Element ProForms သည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်မလိုအပ်ပါ။
Highlight & မျှဝေပါ - စာသားကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့် Twitter နှင့် Facebook မှ LinkedIn၊ အီးမေးလ်၊ Xing နှင့် WhatsApp အပါအဝင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများမှမျှဝေရန် plugin ။ သင်၏အသုံးပြုသူများကိုဝေမျှရန်နှိပ်ပါရန်ခွင့်ပြုသည့် built-in Gutenberg ပိတ်ပင်တားဆီးမှုလည်းရှိသည်။
OptinMonster - visitors ည့်သည်များကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ဖောက်သည်များဖြစ်လာစေမည့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သောပုံစံများကိုဖန်တီးပါ။ သင့်ရဲ့ opt-in form ကိုစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းအပြားပြုလုပ်ရန် popups, floating footer bars, slide-ins နှင့်အခြားသူများမှရွေးချယ်ပါ။
Jetpack - Jetpack သည်သင်၏ WordPress ဆိုဒ်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည့်အခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေသောဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ငါယုံကြည်သောသော့ချက်လက္ခဏာနှစ်ရပ်မှာလူမှုရေးခွဲဝေမှုစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်တိုးမြှင့်ခြင်းမှတဆင့်ရယူသည်။ အခြားအင်္ဂါရပ်များတစ်တန်ရှိပါတယ်သော်လည်း! အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ plugin ကို Automattic ကတီထွင်ထားတာကြောင့်အဲဒါကိုရေးသားပြီးအမြင့်ဆုံးစံနှုန်းနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
WooCommerce - အွန်လိုင်းစတိုးတည်ဆောက်ရန်လူကြိုက်အများဆုံး eCommerce ပလက်ဖောင်း။ Woocommerce သည် WordPress ကိုတီထွင်သူများအား Automattic မှအဖွဲ့မှတိုးမြှင့်မှုနှင့် plugins များစွာဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံသည်။
သင်၏ WordPress စီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ရန် အကြိုက်ဆုံး WordPress ပလပ်အင်များ
ပိုမိုကောင်းမွန်သောရှာဖွေခြင်းကိုအစားထိုးပါ - အကြောင်းအရာများ၊ လင့်များသို့မဟုတ်အခြားဆက်တင်များအတွက်ဒေတာဘေ့စ်ပေါ်တွင်သင်ရှာဖွေ / အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ ဤပလပ်အင်သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် disable - မှတ်ချက်များသည် ရှာဖွေမှုအဆင့်များ နှစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီး သင့်ဆိုဒ်၏ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကို ဆွဲဆောင်ရန်၊ သို့သော်လည်း၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း spamming မှတ်ချက်များသည် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်လာပြီး စကားဝိုင်းသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာချန်နယ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ ဤပလပ်အင်သည် မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို ပိတ်ပြီး သင့်ဆိုက်ပေါ်တွင် လွှင့်တင်ခြင်းမှ မှတ်ချက်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားပါမည်။ ထုတ်ပြန်ထားသော မှတ်ချက်များအားလုံးကိုလည်း ဖျက်နိုင်သည်။
Post ကိုပွား - သင့်အကြောင်းအရာကို မိတ္တူပွားရန် လိုအပ်ပါက၊ ဤပလပ်အင်သည် အကြောင်းအရာကို ပွားနိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍများ၊ မည်သည့်ဒြပ်စင်များ ထပ်ပွားနေသည်နှင့် အခြားအရာများအပေါ် အကန့်အသတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
WordPress အတွက် Google Tag Manager - Google Tag Manager မှသင်၏နောက်ထပ် script များနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပါ။ ဤပလပ်အင်သည် WordPress အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်စရာတန်ချိန်များစွာရှိသည်။
ပို့စ်စာရင်းအထူးပုံရိပ် - ကထပ်ပြောသည် အသားပေးပုံရိပ် admin ရဲ့ရေးသားချက်များနှင့်စာမျက်နှာများရှိကော်လံ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေဖြင့်မည်သည့်ပို့စ်များ (သို့) စာမျက်နှာများတွင်အထူးပုံဖော်ထားသောပုံရှိသည်။
လျင်မြန်စွာမူကြမ်း Access ကို - သင်သည်မူကြမ်းများစွာကိုစီမံနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ဤပလပ်အင်သည်သင့်အားသင်၏မူကြမ်းများသို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်သည့်ရေတွက်ပြသရန်အလွန်ကောင်းသောဖြတ်လမ်းတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးသည်။
Google မှဆိုက် Kit - ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အောင်မြင်မှုရရန် Google ၏အရေးကြီးသောကိရိယာများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုဖြန့်ကျက်ရန်၊ စီမံရန်နှင့်သိရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်။ ၎င်းသည် WordPress dashboard ပေါ်ရှိဂူးဂဲလ်ထုတ်ကုန်မျိုးစုံမှတိုက်ရိုက်၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်အတွက်ခေတ်မီသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုပေးထားပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
စကားဝှက်မပါဘဲ ယာယီဝင်ရောက်ပါ။ - သင်၏ WordPress စံနမူနာကို ယာယီအသုံးပြုခွင့်အတွက် ဆောင်ပုဒ် သို့မဟုတ် ပလပ်အင်ဆော့ဖ်ဝဲကို ပံ့ပိုးပေးလိုသည့်အကြိမ်များရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို စာရင်းသွင်းရန်နှင့် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် စကားဝှက်များရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို သင်မဖြတ်သန်းနိုင်ပါ။ ဤပလပ်အင်သည် သင့်အား ကူညီရန်အတွက် သင့်ဆိုက်သို့ အကောင့်ဝင်ရန် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သော တိုက်ရိုက် ယာယီလင့်ခ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်ကိုလည်း သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
WP Mail မှတ်တမ်း - မင်းအီးမေးလ်တွေကို PHP (သို့) SMTP ကတဆင့်မင်း site ကနေပို့တာဟုတ်မဟုတ်မင်းတွေးဖူးလား၊ WP Mail Log ကမင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုစာပို့တာကိုခြေရာခံဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ plugin တစ်ခုပဲ။
WP အားလုံးသွင်းကုန် - XML ​​နှင့် CSV ဖိုင်များမှ ဒေတာများ တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ပလပ်အင်များ စုစည်းမှု နှင့် WordPress ၏ လူကြိုက်များသော ပလပ်အင်များ အများအပြား။
Layout နှင့် Editing အတွက် အကြိုက်ဆုံး WordPress Plugins
Gutenberg အတွက် Advanced Rich Text Tools - အကယ်၍ သင်သည် ကုဒ်၊ စာခွဲ၊ စာလုံးကြီး၊ စာတန်း၊ စာသားနှင့် နောက်ခံအရောင် တည်းဖြတ်ခြင်း အပါအဝင် WordPress ၏ မူရင်း Gutenberg တည်းဖြတ်မှုတွင် နောက်ထပ် ပုံစံအချို့ကို လိုအပ်နေပါက… ဤရိုးရှင်းသော ပလပ်အင်သည် စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Element Pro - WordPress အတွက်မူရင်းအယ်ဒီတာသည်ဆန္ဒရှိပြီးစိတ်ပျက်စရာများစွာရနိုင်သည်။ Elementor သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော WYSIWYG အယ်ဒီတာ၊ ပုံစံများ၊ ပေါင်းစည်းမှုများ၊ အပြင်အဆင်များ၊ ပုံစံများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ ငါအဲဒါမရှိရင် site တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ငါသေချာမသိဘူး။
သင့်အကြောင်းအရာနှင့် ၎င်း၏လက်လှမ်းမီမှုကို မြှင့်တင်ရန် အကြိုက်ဆုံး WordPress ပလပ်အင်များ
အဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်အကွက်များ - အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ စာရေးသူများနှင့်အယ်ဒီတာများအတွက်လွယ်ကူအောင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ACF သည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အချို့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အပိုလိုင်စင်ရထပ်ဆောင်းများကိုဝယ်ပါ။
ARVE အဆင့်မြင့်တုံ့ပြန်မှုဗီဒီယို Embedder - မြှုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများသည်သင်၏ဆိုက်တွင်တုန့်ပြန်သော layout များကိုထိန်းသိမ်းရန်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ WordPress သည်ပလက်ဖောင်းများစွာကိုမူလရင်းမြစ်ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော်လည်း၎င်းတို့တုန့်ပြန်မှုမသေချာပါ။
လွယ်ကူသောလူမှုဝေမျှမယ်ခလုတ် - သင်၏လူမှုအသွားအလာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့်မျှဝေခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည် analytics အင်္ဂါရပ်များ။
လွယ်ကူသော WP SMTP - သင်၏ hosting provider မှ WordPress အသိပေးချက်များ၊ သတိပေးချက်များနှင့်အလိုအလျောက်အီးမေးလ်များကိုပို့ခြင်းသည်ဒုက္ခရောက်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ရ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှတဆင့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန် SMTP ကိုသုံးခြင်းသည်ပိုလုံခြုံပြီးပို့ဆောင်ရန်အလားအလာပိုများလိမ့်မည်။ ဤအရာကိုမည်သို့သတ်မှတ်ပုံကိုပြသောဆောင်းပါးများရှိသည် Google or Microsoft က.
Feedpress ပါ - FeedPress သည် feed redirections များအားအလိုအလျောက်ကိုင်တွယ်ပြီးသင်ပို့စ်အသစ်တစ်ခုကိုတင်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်သင်၏ feed ကို update လုပ်သည်။
OneSignal - mobile push၊ web push၊ အီးမေးလ်နှင့် in-app မက်ဆေ့ခ်ျများ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့်စာမူတစ်ခုစီကိုလက်ခံရရှိသူများကိုအသိပေးပါ။
Podcast Feed ကစားသမား Widget - ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီထွင်ခဲ့သောဝစ်ဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအတော်လေးရေပန်းစားသည်။ သင်၏ podcast ကိုအခြားနေရာများတွင် hosting ရှိလျှင် feed ကိုထည့်။ သင်၏ podcast ကိုဘေးဘားတွင်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ် post တစ်ခုအတွင်း shortcode ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် WordPress ၏ဇာတိ HTML အသံဖွင့်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။
GTranslate - သင်၏အချက်အလက်များအားအလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာဖွေရေးအတွက်သင်၏ WordPress ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်ဤ plugin နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Apple News သို့ထုတ်ဝေပါ - သင်၏ WordPress ဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာကိုသင်၏ Apple News ရုပ်သံလိုင်းသို့ထုတ်ဝေခွင့်ပြုသည်။
မကြာသေးမီက - ကြီးမားသောပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများပေးနိုင်ရန်သင်၏လတ်တလောအကြောင်းအရာများဖြင့်သင်၏အောက်ခြေရှိဝစ်ဂျက်တစ်ခုကိုထည့်ပါ။ ဤပလပ်အင်တွင်ဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများများစွာရှိသည်။
စာမူဟောင်းများကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပါ - သင်သည်အကြောင်းအရာများကိုထပ်ခါတလဲလဲဝေမျှနိုင်သည့်အခါသင်၏အကြောင်းအရာများကိုတစ်ချိန်တည်းမျှဝေပါ။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတွန်းအားပေးပြီးသင်၏ပါဝင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသဘောပေါက်ခြင်း။
WordPress လူကြိုက်များသောပို့စ်များ - သင်၏ရေးသားချက်များနှင့်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်သင်၏လူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းအရာဖြင့်သင်၏အောက်ခြေရှိဝစ်ဂျက်တစ်ခုကိုထည့်ပါ။ ဤပလပ်အင်ကိုမကြာသေးမီကပင်ရေးသားသူမှတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ အချို့သောအဆင်သင့်ထည့်သွင်းထားသောတင်းပလိတ်များသည်လည်းသွားရန်ရှိသည်။
WP PDF ဖိုင်ရယူရန် - WordPress တွင်မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသော PDF ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ကြည့်ရှုသူများအားသင်၏မူလဖိုင်များကိုကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းမှတားဆီးပါ။
WP အသုံးပြုသူ Avatar - ယခုလက်ရှိ WordPress သည်သင်မှတစ်ဆင့်တင်ထားသောစိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုခွင့်များကိုသာခွင့်ပြုသည် Gravatar။ WP User Avatar သည်သင်၏ Media Library ထဲသို့တင်ထားသောမည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆို avatar အဖြစ်သုံးရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ WordPress ဆိုက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် အကြိုက်ဆုံး WordPress ပလပ်အင်များ
Kraken ပုံရိပ် Optimizer - အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲပုံ၏အရွယ်အစားနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကြာချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်ပျံသန်းမှုတွင်ရုပ်ပုံများနှင့်သမ်းနေးလ်များကိုကောင်းမွန်စေသည်။
StackPath CDN - ပိုမိုမြန်ဆန်သော page load အချိန်၊ ဂူဂဲလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် StackPath CDN နှင့် ပိုမို၍ စကားပြောဆိုမှုများကိုရယူပါ။ setup ကိုရိုးရိုးလေးသာမိနစ်ကြာပါတယ်။
WordPress ကို SEO ဆိုသည်မှာ -Rank Math သည်စာမျက်နှာပေါ်မှအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ XML sitemap များ၊ ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများ၊ ပြန်ညွှန်းချက်များ၊ ၄၀၄ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောပေါ့ပါးသော SEO Plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ Pro ဗားရှင်းတွင်ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများ၊ နေရာများစွာနှင့်အခြားအရာများအတွက်မယုံနိုင်စရာအထောက်အပံ့ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာကုဒ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းစွာရေးထားသောကြောင့်သင်၏ WordPress SEO plugins များကဲ့သို့သင်၏ site ကိုနှေးကွေးစေခြင်းမရှိပါ။
WP Rocket - WordPress ကိုအနည်းငယ်ကလစ် နှိပ်၍ မြန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းကို WordPress မှကျွမ်းကျင်သူများ၏အားအရှိဆုံး cache plugin အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
Cookie နှင့် Data Compliance အတွက် အကြိုက်ဆုံး WordPress ပလပ်အင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည် visitors ည့်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုသင်မည်သို့ခြေရာခံ။ သိမ်းဆည်းသည်ကိုထိန်းချုပ်သည့်နိုင်ငံတကာ၊ ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ငါကွတ်ကီးခွင့်ပြုချက်များအတွက် Jetpack ဝစ်ဂျက်ကိုအသုံးချခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဖွင့်ပြီးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများမရှိပါ။
GDPR Cookie သဘောတူညီချက် (CCPA Ready) - GDPR Cookie Consent plugin သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် GDPR (RGPD, DSVGO) နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဤ GDPR WordPress plugin ကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ဘရာဇီးလ်၏ LGPD နှင့် California Consumer Privacy Act (CCPA) နှင့်အညီ cookie လိုက်နာမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည်မှာလည်းကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုအခွင့်အရေးနှင့်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
သင်၏ WordPress ဆိုက်ကို ကာကွယ်ရန် အကြိုက်ဆုံး WordPress ပလပ်အင်များ
Akismet - WordPress ၏လူကြိုက်အများဆုံး plugin, Akismet သည်သင်၏ဘလော့ဂ်အားမှတ်ချက်များနှင့် trackback spam များမှကာကွယ်ရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထည့်သွင်းရုံသာမကထိုလူရှုပ်များကိုသတင်းပို့ပါ။
VaultPress - သင့်အကြောင်းအရာ၊ အပြင်အဆင်များ၊ ပလပ်အင်များနှင့် ဆက်တင်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်လုံခြုံရေးစကင်န်ဖတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကာကွယ်ပါ။
WP လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်း - သုံးစွဲသူအပြောင်းအလဲများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရန်၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း လွယ်ကူစေရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဟက်ခ်များကို စောစီးစွာ တားဆီးရန် သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် အပြည့်စုံဆုံး WordPress လုပ်ဆောင်ချက် မှတ်တမ်းပလပ်အင်။ စာရင်းသွင်းရင် Jetpack လုံခြုံရေး or Jetpack ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြည့်စုံသော လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်တမ်းကိုလည်း သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အပြည့်အဝထောက်ပံ့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, ပေးဆောင် plugins အချို့ရှိပါသည် Themeforest မင်းဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ဘူး မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Envato သည်ပလပ်ဂင်များအားမကြာခဏမွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်နှင့်သေချာစေရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။
ထုတ်ဖော်: ငါအသုံးချတာပါ တွဲဖက်ကုဒ်များ ဤစာစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကို နှိပ်၍ ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေမှုကိုထောက်ခံပါ။
Tags: Akismetအကောင်းဆုံးပလပ်ဂင်များအကောင်းဆုံး wordpress plugin များကိုစီးပွားရေး wordpress plugins များccpaCDNလိုက်နာမှု plugin ကိုcookie ကိုမူဝါဒကပို့စ်များကို ပွားပါ။အကြိုက်ဆုံး plugins များအကြိုက်ဆုံး wordpress ပလပ်အင်များgdprgoogle site kit ပါGutenbergpodcast ကစားသမားမင်္ဂလာပါအမြန်မူကြမ်း access ကိုအဆင့်သင်္ချာပြန်ပို့သည်ကြွယ်ဝသောစာသားတည်းဖြတ်ခြင်း။တိတ်တခိုးဝစ်ဂျက်ပလပ်အင်များWidgets တွေWordPresswordpress စာရင်းစစ်မှတ်တမ်းwordpress backup ပလပ်အင်wordpress CDDwordpress cdn plugin ကိုwordpress အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပလပ်ဂင်wordpress ပုံစံများ plugin ကိုwordpress plugin များကိုwordpress podcast ကို plugin ကိုwordpress smtp plugin ကိုwordpress လူမှုရေးဝေစု plugin ကိုwp ဒုံးပျံ
သင့်ဝယ်ယူသူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် မူဘောင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
TaskHuman- အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒစ်ဂျစ်တယ် အရောင်းလေ့ကျင့်ရေး ပလပ်ဖောင်း
ဇန်နဝါရီလ5ရက် 2015 ခုနှစ် ညနေ 11 နာရီ 21 မိနစ်
ကြီးမြတ်သောစာရင်းနှင့် infographic ။ ခါတိုင်းလိုပဲ၊ အဟောင်း၊ ရင်းနှီးပြီးသား လူကြိုက်များပြီး အသစ်အချို့ကို ကျွန်တော် check-out လုပ်ရတော့မယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ6ရက် 2015 ခုနှစ် ညနေ 1 နာရီ 53 မိနစ်
ဇွန် 28, 2015 မှာ 11: 34 pm တွင်
ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲ မသိဘူး ဖတ်ဖို့ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် တစ်ဝက်တစ်ပျက် အောက်ကို လှိမ့်ဆင်းခဲ့ရပြီး အဲဒါနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး။ ရောင်စုံခလုတ်များနှင့် 3/4 စာမျက်နှာဘေးဘားသည် ကျွန်ုပ်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ပေါ်လာသည့်အရာသည် စီးပွားရေးစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သင်ထင်ပါက ၎င်းကို သင်ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ မင်းငါ့မှာ ရှိတဲ့အတိုင်း မင်းနဲ့ တစ်ခုခု ဝေမျှဖို့ ဒီစာရေးရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒါက CHASE ကိုဖြတ်တယ်။ ကျောင်းဟောင်းနဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်နည်းပညာက အရှိန်အဟုန်နဲ့ ရွေ့နေမှာ သေချာပါတယ်။ သို့သော် သေချာပေါက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် လုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် သင့်ပြိုင်ဘက်များထံ သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သင့်စာဖတ်သူအများစုသည် အရောင်ကန်းနေပါက ကျွန်ုပ်ကို အံ့သြမည်မဟုတ်ပါ။ ငါ ဒီလမ်းကို သွားနေတာ သေချာတယ်။
ဇွန် 29, 2015 မှာ 12: 31 pm တွင်
အကြံပြုချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် Steve။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနေရာတွင် အကြောင်းအရာကို သင့်အတွက် အခကြေးငွေမယူဘဲ ပေးဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စာဖတ်သူသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဂဏန်းနှစ်လုံးပါလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်များ၊ ကြော်ငြာရှင်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာများ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်ပိုလိုလားပါသည်။ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
9:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 48
မင်္ဂလာပါ Douglas! စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်လေး ဒီမှာ ရှိတယ်။ ကြီးစွာသောအကူအညီ။ ကျေးဇူးပါ။
10:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 21
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ပြီးတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။